သင့်ရဲ့ဖုန်းကို VKONTAKTE ON ကို INSTALL လုပ်နည်း - ဖုန်းကို - 2019
Android နှင့် iOS နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းအပေါ် VKontakte Installing
ဒီဖြစ်စဉ်သည် BSOD ကိုပဌနာဖို့ပိုမှန်ကန်အဖြစ်မိသားစု windose စနစ်များအတွက်အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအရှိဆုံးမနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေများတစ်ခုမှာ "သေမင်း၏အပြာမျက်နှာပြင်" ၏ပေါ်ပေါက်ရေးသို့မဟုတ်။ မအောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သောအချက်များအနက်ကအမှား 0x0000000a သတိပြုသင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စေသောငါတို့သည်အဘယ်သို့ကို Windows7မှာကဖယ်ရှားပစ်ရနိုငျပါအတိအကျဘာအသေးစိတ်အတွက်စကားပြောပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ၏အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုစား 0x0000000a အမှား
အဆိုပါ RAM ကိုပျက်ကွက်;
RAM သို့မဟုတ် devices များနှင့်အတူမှားယွင်းနေကားမောင်းသူအပြန်အလှန်;
ယင်းချိတ်ဆက်ကိရိယာ (ပရိသ devices များမကြာခဏအရည်အသွေးညံ့ဖျင်း) နဲ့စနစ်များပဋိပက္ခ;
Method ကို 1: ကိရိယာများကိုပိတ်ထားပါ
သင်ကွန်ပျူတာသစ်ကိုဟာ့ဒ်ဝဲချိတ်ဆက်ပြီးနောက်အမှား 0x0000000a မကြာမီပေါ်ထွက်လာဖို့စတင်ခဲ့ကြောင်းသတိထားမိလျှင်, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိသောကြောင့်ပဲရှိပါတယ်။ ကြောင့်ပရိသ၏အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းငှါ၎င်းထိုသို့ device ကိုသင်၏ operating system ဆော့ဝဲအစုအဝေးနှင့်သဟဇာတမဖြစ်, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုကို turn off နှင့် PC နဲ့အလုပ်၏ပစ်လွှတ်စောင့်နေကြလော့။ အမှားပိုကြီးပေါ်လာမပါဘူးဆိုရင်, သင်ကများ၏အကြောင်းရင်းတွေ့ပြီကြောင်းစဉ်းစားပါ။ သငျသညျပျက်ကွက်သောအရာကိုပစ္စည်းကိရိယာများသေချာမသိကြပါကတသမတ်တည်းကွဲပြားခြားနားသော device များပိတ်ခြင်းနှင့်အမှားအယွင်းများအတွက်စနစ်စစ်ဆေးနေ, ရှာတဲ့နည်းလမ်းကိုကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Method ကို 2: ယာဉ်မောင်းများ၏ဖယ်ရှားရေး
သငျသညျနေဆဲပြဿနာ device ကိုအသုံးပြုချင်လျှင်သို့သော်, သင်ကားမောင်းသူကိုဖျက်ပစ်ရန်ကြိုးစား, ပြီးတော့တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်မှဆင်းသက်လာသည်အခြား analogue ဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ BSOD စနစ်က startup စဉ်အတွင်းပြီးသားရှိလျှင်ထို့ကြောင့်သင်၌ပြုလုပ်သို့သွားကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် "ကို Safe Mode ကို"။ ကွန်ပျူတာစတင်သည်သည့်အခါသင်သည်လူတယောက် button ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အများစုကတော့က F8။ ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့စာရင်းအတွက် option ကို select လုပ်ပါ "ကို Safe Mode ကို" နှင့်စာနယ်ဇင်း ဝင်ရောက်.
စာနယ်ဇင်းများ "Start"။ သွားပါ "Control Panel ထဲက".
အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းအုပ်စုတစ်စု "စနစ်" ထိုး "Device Manager".
ဒါဟာ window ကိုဖွင့်လှစ် "Device Manager"။ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်သင့်ရဲ့အမြင်ထဲမှာတစ်ခုအမှားမှဦးဆောင်သည့်အဆိုပါကိရိယာနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းကိရိယာများအမျိုးအစားကိုနေရာချထား။ ဒါကအများစုဖွယ်ရှိသည်, သင်အတော်လေးမကြာသေးမီကသုံးစွဲဖို့စတင်ခဲ့သောပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျထိုပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းသတ်မှတ်အဖြစ်အခြားနေ့ကကဒ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ထင်လျှင်ဥပမာ, ထို့နောက်အပိုင်းအမည်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Display ကို adapter"။ သငျသညျသစ်တစ်ခုကီးဘုတ်စတင်သုံးစွဲလျှင်ဤအမှု၌, ထိုအပိုင်းကိုသွား "Keyboards" တခါတရံတွင်ပြဿနာယာဉ်မောင်းအမည်သတင်းအချက်အလက်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုအမှား (တိုက်ရိုက်မြင်နိုင်ပါသည်ပေမယ့်BSOD).
ချိတ်ဆက် devices များရွေးချယ်ထားသောအမျိုးအစားစာရင်းတစ်ခု။ (ထိုပြဿနာဖြစ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာမှခေါင်းစဉ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, right-clickPKM) ။ ရှေးခယျြ "Properties ကို".
next ကိုစာနယ်ဇင်း "ကိုဖျက်".
သငျသညျနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ယာဉ်မောင်း uninstall လုပ်ဖို့သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်ရှိရာပေးတဲ့ dialog box ကို၏အခွံကို run "အိုကေ".
ပြန်ဖွင့် PC ကို။ စာနယ်ဇင်းများ "Start"ထို့နောက်ဒြပ်စင်၏ညာဘက်မှအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Down Shut"။ ရလဒ်စာရင်းထဲတွင်, select လုပ်ပါ "ပြန်လည်စတင်ပါ".
အဆိုပါ PC ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်စနစ်ချိတ်ဆက်ခံရဖို့စံကားမောင်းသူကိရိယာ၏တဦးတည်းကောက်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒီကမှာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေလျှင်, ထိုကိစ္စတွင်၌သင်တို့ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ် (ကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ်သင့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူပါလာသော disc ကိုကနေ install) ကနေဒီကို item set ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်နောက်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်, သို့မဟုတ်သင်အရင်းအမြစ်များ၏သေချာမသိကြလျှင်, သင်အလိုအလြောကျ drivers တွေကို install လုပ်ဖို့အထူးပြု software ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာ drivers တွေကို web ပေါ်မှာသူတို့ကိုတွေ့ပါက install လုပ်ပါလိမ့်မယ်ပျောက်ဆုံးဖော်ထုတ်ရန်, ချိတ်ဆက် device များအတွက်တစ်ခုလုံးကို system ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လိုသင့်ရဲ့ PC မှာ drivers တွေကို update လုပ်ဖို့
Method ကို 3: ယာဉ်မောင်း parameters တွေကိုစစ်ဆေးနေ Reset
မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါလည်း, သင်ယာဉ်မောင်း Verified settings ကိုပြန်ညှိရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ အဆိုပါဖော်ပြထားပြဿနာကိုသင် operating system ကိုသို့မဟုတ်အခြား updates များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါအလွန်ကိုမကြာခဏ, ဒီနည်းလမ်းကိုကူညီပေးသည်။ ယင်းကဆိုသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကောင်အထည်ဖော်ပေးရန်, သငျသညျမြားကိုလညျးစနစ် run ရမယ် "ကို Safe Mode ကို".
အတွက်စတင်ပြီးနောက် "ကို Safe Mode ကို" တစ်ဦးကိုနှိပ်လျှောက်ထား ဦးဝင်း + R ကို။ ပုံပေါ်သောလယ်ပြင်တွင်, type ကိုအခွံ:
အတည်ပြုခြင်း / မှပြန်လည်စတင်
သင့်ရဲ့ PC ကို restart ချလိုက်ပါပြီးရင်ပုံမှန်အတိုင်းအပေါ် log ။ ကားမောင်းသူ Verified setting များကို default settings ကိုမှ reset မည်ဖြစ်ပြီးယခုဤဆောင်းပါးတွင်အတွက်ဖော်ပြထားပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုယူဆရသည်။
Method ကို 4: BIOS ကို Setup ကို
ဒါ့အပြင်အမှားကြောင့်ဖွဲ့မှုလွဲမှား နေ. BIOS ကိုမှဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်, ဥပမာအားဖြင့် IRQL ထိုသို့ Re-adjust, ထိုသို့ပြဿနာမှ လာ. အဘယ်အရပ်သို့ဖြစ်လျှင်နားမလည်ကြဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင် BIOS ကိုရိုက်ထည့်ရပါမည်နှင့်သူတို့၏က default ပြည်နယ်ဖို့ settings ကို reset ရန်, အမည်ရ, မှန်ကန်သော parameters များကိုထားကြ၏။
တခါတရံကဟာ့ဒ်ဝဲဆက်စပ်ပစ္စည်း PC ကို၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် BIOS ကိုနှင့်ကျရှုံးမှုကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းမှကူညီပေးသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျကိုအောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများကို disable ရမယ်:
cache ကို 2nd နှင့် 3rd အဆင့်အပါအဝင် cache,
built-in BIOS ကို antivirus ကို (ရှိပါက);
အဲဒီနောကျက firmware ကိုဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့် Motherboard ကကို update, အဲဒီနောက်မှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်မှုကိုသက်ဝင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါ့အပြင်လျှင်တစ်ဦးကို PC ကပိုမှတ်ဉာဏ် module တွေတခြားကွန်ပျူတာကနေသူတို့တစ်ဦးစီတဦးတည်းကို disable နှင့်အမှားသွားကြောင်းရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ထိုပြဿနာကိုသင်ကအစားထိုးဖို့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုတည်း (နိမ့်ဆုံး) တန်ဖိုးသူတို့ကိုလျှော့ချရန်ခြားနားချက်အကြိမ်ရေ module တွေမှာကြိုးစားသင့်ဖြစ်စေမည်သည့်ကိစ္စရပ်တွင်ကွန်ကရစ်ချွတ်အတွက်ဘော်လျှင်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူတစ်ကွန့်ကွင်း၌ဤကိန်းဂဏန်းကိုလျှော့ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို (BIOS ကို) လုပ်ရပ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်း, ရုပ်ပစ္စည်းကွဲပြားစေခြင်းငှါကြောင့်ဤစစ်ဆင်ရေးများအတွက် universal algorithm ကို, မတည်ရှိပါဘူး။
Method ကို 5: updates များကို Install
သင်တစ်ဦးကို PC ကဘလူးတုသ်ကိရိယာများနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ hibernation သို့မဟုတ် sleep mode ထဲကရရန်ကြိုးစားသောအခါ 0x0000000a တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်အရာရှိတစ်ဦးကို Microsoft website ကိုမှအ KB2732487 update ကိုအထုပ်ဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
32-bit နဲ့စနစ်များများအတွက် update ကို Download လုပ်ပါ
64-bit နဲ့စနစ်များများအတွက် update ကို Download လုပ်ပါ
ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ရိုးရိုးလေးက run ။
အဆိုပါစနစ်အားကိုယ်တိုင် update ကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးအရေးယူသင့်ထံမှလိုအပ်ပါသည်မရှိပါ။
ပြဿနာများမရှိဘဲကွန်ပျူတာတောင်မှတစ်ဦးချိတ်ဆက် Bluetooth ကို-enabled devices များနှင့်အတူ hibernation သို့မဟုတ် sleep mode ထဲကရောက်လိမ့်မည်။
Method ကို 6: System ကိုဖိုင်များ Restore
အမှား 0x0000000a မှဦးဆောင်သောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ, စနစ်ဖိုင်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏တစ်ဦးကိုချိုးဖောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်သည်ထိုပြဿနာကိုစစ်ဆေးနေများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်သည့်အခါလိုအပ်သောဒြပ်စင် restore ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတာဝန်လုပ်ဆောင်ဖို့ PC ကိုစတင်သည် "ကို Safe Mode ကို".
ရိုက်သံ "Start"။ စာနယ်ဇင်းများ "All Programs".
directory ကိုကိုသွားပါ "စံ".
နာမည်တစ်ခုကိုတွေ့တော်မူပြီးမှ "Prompt ကိုဆင့်ဆို"ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ PKM။ အဆိုပါပြသစာရင်းမှာတော့ကို select "စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် Run".
shell ကို activated "Prompt ကိုဆင့်ဆို"။ ဤ entry ကို Make:
သူတို့ရဲ့သမာဓိဆုံးရှုံးမှုများအတွက် system files ကိုဖတ်တဲ့ utility ကိုစတင်ပါ။ ထိုပြဿနာနှင့်အတူအမှား၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ပွနျလညျထူထောငျရလိမျ့မညျ။
Method ကို 7: Recovery ကိုစနစ်
အမှားပြင်ပေးဖို့မသာခွင့်ပြု, ဒါပေမယ့်လည်းများစွာသောအခြားပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပစ်ရထားတဲ့ universal နည်းလမ်းတစ်ယခင်ကအမှတ် restore ဖန်တီးရန်စနစ်ပြန်လှိမ့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂျများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်ဆက်စပ်အဓိကဖမ်းသည့်အမှားဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ထိုနာလန်ထူအမှတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခံရဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စနစ်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မြဲမြံစေရန်ဤနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
မီနူးကိုသုံးပြီး "Start" directory ကို Programs ကိုမှ navigate "စံ"။ ယခင်နည်းလမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီအကူးအပြောင်း algorithm ကို။ အဆိုပါ catalog ကိုသွားပါ "System Tools".
စာနယ်ဇင်းများ "System Restore".
ပြေး utility ကိုပြန်လည်နာလန်ထူမှုစနစ်တ္ထုတွေနဲ့ parameters Shell ။ စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို".
ထိုအခါသင်က system ကိုပွနျလညျထူထောငျပါလိမျ့မညျသောတိကျတဲ့အချက်ကို select ဖို့လိုအပ်ရှိရာပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ သငျသညျအနညျးငယျရှေးခယျြစရာရိတ်သိမ်းကြလျှင်, လတ်တလောနေ့စွဲကိုရွေးချယ်ပါ, ဒါပေမယ့်ဖော်ပြထားပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါသည်မတိုင်မီဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ရှေးခယျြမှု၏ကြီးမြတ်သောအကွာအဝေးရှိသည်နိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့် box ကိုစစ်ဆေး "Show ကိုပိုပြီး ... "။ ခွဲခြာပြီးနောက်ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
အခုတော့ပြတင်းပေါက်သာအားလုံးသော posts စစ်ဆေးရန်ရှိသည်ထားတဲ့အတွက်ဖွင့်လှစ်။ ဒါ့အပြင်အရှင်သတင်းအချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်အပေါင်းတို့, တက်ကြွ applications များပိတ်လိုက်ပြီးသူတို့ကိုစာရွက်စာတမ်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်သေချာစေပါ။ ထို့နောက်လျှောက်ထား "ပြီးပြီ".
PC ကို restart လုပ်ပါလိမ့်မယ်အပေါင်းတို့နှင့်စနစ်ဖိုင်တွေနဲ့ settings ကိုကအမှတ် restore ကိုရှေးခယျြဖို့ reset လိမ့်မည်။ က 0x0000000a အမှားမတိုင်မီဖန်တီးခဲ့ခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်များ၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ခဲ့လြှငျ, ဖြစ်နိုင်ခြေ၏မြင့်မားသောအဆင့်နှင့်အတူဤအမှု၌သင်တို့ကိုဤပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်။
Method ကို 8: ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမှား 0x0000000a မှဦးဆောင်သည့်ပြဿနာများ, အမျိုးမျိုးသောမူရင်းဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်ကျနော်တို့ကိုလေ့လာနေကြတယ်ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာဖို့အောက်ပါအချက်များကိုးကား:
ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးအရေးကြီးသော system files ကို;
ပထမဦးဆုံးအမှု၌, ကုသမှုအပြင်၌ထုတ်ဖော်တစ်ယခင်ကအမှတ် restore ဖန်တီးရန်ပယ်ဖျက်ရန်ဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ကြရလိမ့်မယ် ဖြစ်စဉ်ကို 7သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို restore ဖို့အသုံးပြုကြောင်းဖိုင်စနစ်၏နည်းလမ်းအားဖြင့်စိစစ်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို run6လမ်း.
ထိုခဏခြင်းတွင်သင်သည်တစ်ခုခုကိုသုံးရန်ဗိုင်းရပ်စ်၏ကုသမှုများအတွက်ကို PC Anti-virus ကို utility ကိုမတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်နိုင်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာပြုလုပ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုဒ်၏ရှေ့မှောက်တွင်စစ်ဆေးသည်မည်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အများဆုံးမှန်ကန်ခဲ့ကြောင်း, ထိုသို့ LiveCD သို့မဟုတ် USB သုံးပြီးဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ဒါ့အပြင်သူကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား Virus ကူးစက်ထားခြင်းမရှိတဲ့ကွန်ပျူတာကနေဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်များ၏ utility ကိုဖော်ထုတ်ခုနှစ်တွင်သူမကအကြံပြုသောလုပ်ရပ်များအလုပ်လုပ်င်းဒိုး (စသည်တို့ကိုဗိုင်းရပ်စ်၏ဖယ်ရှားရေး, ကုသမှု, လွှဲပြောင်း) အတွက်ဖျော်ဖြေဖို့လုပ်
သင်ခန်းစာကို: antivirus ကို install လုပ်မပါဘဲဗိုင်းရပ်စ်အဘို့ကို PC ကိုစကင်
အမှား 0x0000000a အတော်ကြာအကြောင်းတရားများရှိပါသည်။ သို့သော်ကြောင့်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းများ၏သဟဇာတမမှသူတို့ထဲကအများစုဟာ။ သငျသညျထိုပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပစ္စည်းခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးလျှင်, သင့်လျော်တဲ့ Restore point တစ်ခုနှင့်အတူသင်တစ်ဦးအစောပိုင်းကပြည်နယ်ဖို့ operating system ကိုပြန်လှိမ့်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားမတိုင်မီဗိုင်းရပ်စ်များအတွက် system ကိုစစျဆေးဖို့သေချာပါစေ။